Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2020 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
သင်ခွင့်ပြုနိုင်သောခွင့်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်။ ဥပုသ်စောင့်ခွင့်သည်သင်၏အခြေအနေနှင့်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပုံရသည်။ ဤနေရာတွင်မလိုအပ်သောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်သင့်အလုပ်ရှင်ထံသို့လက်ခံရရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုစာဖြင့်ပို့ရန်စာတစ်စောင်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အကွက်အတွင်းရှိသင်၏စုပေါင်းသဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်များသည်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေများတွင်စာတိုက်ပုံးသည်သင်၏တောင်းဆိုမှုသက်တမ်းကိုသက်သေပြလိမ့်မည်။
A / R နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသောစာတစ်စောင်
အရာဝတ္တု ။ လစာမလိုဘဲခွင့်ယူရန်တောင်းဆိုခြင်း
ကျွန်ုပ်သည်ကာလအတွက်လခပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲခွင့်ယူရန်တောင်းခံခွင့်ရှိသည် (ရက်ပေါင်းများစွာ) ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ကန့်ကွက်မှုမရှိပါကခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်စတင်လိုသည် (စတင်ရက်စွဲချန်ထားပါအဆုံးသတ်ရန်ခွင့်၏နောက်ဆုံးနေ့စွဲကိုသတ်မှတ်).
အဖြစ်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ဝန်ထမ်း (ကျင်းပသည့်ရာထူး၏ခေါင်းစဉ်ကိုသတ်မှတ်မှ (ကုမ္ပဏီအတွင်းလှုပ်ရှားမှုစတင်ရက်စွဲကိုပေးပါကျွန်ုပ်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုအမြဲတမ်းသမာဓိရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်၏အပ်နှံခြင်းနှင့်အဆင့်တိုင်း၌လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီလိုသောဆန္ဒကိုမြင်နိုင်ပါသည်။
လောလောဆယ်၊ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်နှစ်အရေအတွက်ကိုဖော်ပြပါ) သစ္စာရှိရှိအမှုဆောင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီအတွင်းမျှဝေထားသောတန်ဖိုးများသည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုများနှင့်လုံးဝကိုက်ညီပြီးကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံထိုက်သောအတော်လေးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြproblemနာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလုံးလုံးလျားလျားမြှုပ်နှံ။ သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဤပြproblemနာကိုကြိုတင်ဖြေရှင်းရန်လုံးဝလိုအပ်မည်။ အမှန်စင်စစ် (ပြtheနာ၏သဘောသဘာဝကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပါ).
ဤအခြေအနေကိုအပြည့်အဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနိုင်အောင်), ငါကုမ္ပဏီအတွင်း၌ငါ့လှုပ်ရှားမှုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရန်တာဝန်ရှိကြောင်းလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ခွင့်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲခွင့်တောင်းခံရန်သင့်အားဤတောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက် (အချိန်ယူရန်) အချိန်ငါ့နာမကျန်းဖြစ်မှုသို့မဟုတ်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ၏ဖျားနာမှုကိုဂရုပြုပါ) သို့မဟုတ် (မှန်ကန်စွာသို့မဟုတ်ပြcorrectlyနာကိုဖြေရှင်းရန်).
ကျွန်ုပ်သည်ဤကာလအတွင်းမည်သည့်လျော်ကြေးငွေကိုမဆိုတောင်းခံ။ မရကြောင်းအပြည့်အ ၀ သတိပြုမိသည်။ ထို့အပြင်ဤကာလကိုကျွန်ုပ်အားလစာပေးသောအားလပ်ရက်များမှခံစားခွင့်ရမည့်ထိရောက်သောအလုပ်ချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချိန်ကာလကုန်ဆုံးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်သမားကုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏လက်ရှိရာထူးကိုပြန်သွားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏မရှိခြင်းသည်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်သည်အနုပညာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအစားထိုးမည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူလွှဲပြောင်းပေးမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်မထွက်ခွာမီကျွန်ုပ်၏အဆင့်ရှိဆိုင်းငံ့ထားသောဖိုင်များအားလုံးကိုပုံမှန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုထောက်ပြလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရန်သင့်မှာတာဝန်မရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အပြည့်အဝနားလည်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, ငါသည်သင်တို့၏တရားသဖြင့်စီရင်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်ငါငါ့အခြေအနေကိုနားလည်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချပါသည်
ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုမှုကိုသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ Madam ဒါရိုက်တာ၊ ကျွန်ုပ်၏လေးစားမှုအရှိဆုံးခံစားချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးကျေးဇူးတင်မှုကိုလက်ခံပါ။
“အခကြေးငွေမယူရသေးသော ခွင့်ပန်ချက်အတွက် အဆင်သင့်သုံးနိုင်သော နမူနာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ”	example-ready-to-use-for-a-request-for-leave-without-pay.docx – ဒေါင်းလုဒ် 501 ကြိမ် – 14 KB
ဖတ်ရန် အဆိုပါအစီရင်ခံစာ:4မရှိမဖြစ်အမှတ်အဆိုပါအောင်မြင်မှုသည်ကိုသိရန်
လစာမလိုဘဲခွင့်တောင်းခံရန်မေးလ်၏ဥပမာ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2022Tranquillus
အောက်ပါPrivate Leave အကြောင်းသင်သိထားသင့်သည့်အချက်များ
သင့်စာကြောင်းများကို ပေါ့ပါးစေရန် အကြံပြုချက်ငါးခု